eNasha.com - भविष्य उज्ज्वल देख्छुः सुनुवार
भविष्य उज्ज्वल देख्छुः सुनुवार
अहिले सिमोश सुनुवार चर्चामा छन् । कारण ? कारण उनले लम्बेतान सिनेमा 'मिसन पैसा' को घोषणा मात्र गरेनन्, त्यसको ३० प्रतिशत सुटिङ समेत सकेका छन् । उसो भए ठूलो कुरा के भयो त ? त्यस्तो ठूलो कुरा त केही होइन, तर उनको चलचित्र प्रवेशलाई केही व्यक्तिहरु सिनेमा उद्योगको परिवर्तनको छनक मानिरहेका छन् । उनको प्रवेश त्यतिबेला भएको छ, जब आधुनिक म्युजिक भिडियोका बादशाह भूषण दाहालले समेत कागबेनी प्रदर्शनको तरखरमा पुर्‍याइसकेका छन् ।
शुरुका वर्षमा सङ्गीत संयोजक र सङ्गीतकारका रुपमा विभिन्न विज्ञापन एजेन्सीमा काम गरेका सुनुवार तब चर्चामा आए, जब उनले आस्था साङ्गीतिक ब्याण्डको 'चाहना तिमी मेरो...' (हरपल) भिडियो सार्वजनिक गरे । यो भिडियो बजारमा के आएको थियो, उनी रातारात 'स्टार' भिडियो निर्देशकमा दरिए । भिडियोमा ग्राफिकको उपयोगलाई दर्शकले रुचाएपछि अहिले चलचित्र निर्देशनमा होमिएका छन् । उनी यो कार्यलाई आफैँ 'आगोको भुङ्ग्रोमा हामफाल्नु' मानिरहेका छन् तर पनि आएका चुनौतिलाई सामना तयार देखिन्छन् ।
यिनै असफल सङ्गीतकार तर सफल भिडियो निर्देशकलाई इनशाडटकमले स्टुडियो फोरमा सुटिङको क्रममा समात्यौँ । बातचितको प्रमुख अङ्श-
सिनेमा बनाउँछु भन्ने कुरा कहिले लाग्यो ? के कुराले प्रेरित गर्‍यो, यो क्षेत्रमा लाग्न ?
१३ वर्षअघि । मैले विजय लामाको प्रेरणा टेलिफिल्ममा सङ्गीत र पार्श्व सङ्गीतको काम मैले गरेको थिएँ । त्यसबेला मैले शिशिर राणा (निर्माण नियन्त्रक तथा 'वसन्त ऋतु' चलचित्र निर्माता) लाई चिनेँ । त्यसपछि हामीले मिलेर राजेश हमाल, धीरेन शाक्य (खलपात्रमा) लाई लिएर हामीले 'खण्डहरको फूल' बनाउने निर्णय गरेका थियौँ । सिनेमा त पूरा भयो तर त्यसले टेलिभिजनमा अनुहार देखाउन पाएन । त्यसपछि हामी छुट्टियौँ ।
म्युजिक भिडियोको निर्देशन के त्यसैको तुष थियो त ?
हैन हैन । म्युजिक भिडियो त लहडमा शुरु भएको थियो । १९७४ एडीको बाँच अनि बाँच्न देऊ गीत बनाउने भनेर हाम्रा साथीहरु विश्वदीप लामिछाने, नेक्ससएफएक्सका साथीहरु र मैले मिलेर बनाइयो । तर अनील तण्डुकारले तैँले बनाएकै होइन भनेर जिद्दी गर्नु भयो । अनि मैले उहाँलाई देखाउन भए पनि आस्था ब्याण्डको हरपल गीत गर्नुपर्‍यो । त्यो गीत बजारमा आएपछि म व्यस्त हुन थालेँ ।
अनि, मलाई लाग्यो कि सधैँभरि भिडियो मेकर मात्रै भएर बस्ने ? त्योभन्दा माथि पनि केही चिज छ । त्योभन्दा माथि के हो त भन्दा मैले सिनेमा निर्माण नै देखेँ । त्यही भएर मैले सिनेमा बनाउने निर्णय गरेँ ।
सिनेमा बनाउनुअघि च्यानल नेपाल, ग्यालेक्सी इन्टरटेन्मेन्ट, एभिन्यूज टीभीमा पनि काम गर्नुभयो नि ?
अँ, विश्वकप फूटबलका बेलामा एभिन्यूज टीभीमा काम गर्दा मैले आफूलाई स्तरीय काम गरेँ भन्ने लाग्यो तर त्यसपछि ग्यालेक्सी र च्यानल नेपालमा आफूले चाहेजस्तो काम गर्न सकिनँ । किनभने, काम भनेको कुरा टीम वर्क हो र चाहेको काम लिनका लागि अन्य धेरै स्वतन्त्रताका साथै आर्थिक स्वतन्त्रताले पनि भूमिका खेल्दो रहेछ । च्यानल नेपालको रेटिङ हामी जाने बित्तिकै कति माथि आयो भन्ने कुरा तपाइँले सम्बन्धित ठाउँमा सोध्नुभए हुन्छ । तर मैले बुझेको कुरा के हो भने हर कुरामा मान्छे सफल नहुन पनि सक्छ । च्यानल नेपाल र ग्यालेक्सी इन्टरटेन्मेन्टको कामलाई त्यही रुपमा लिए हुन्छ ।
त्यसपछि तपाइँले मिसन पैसामा हात हाल्नु भयो, किन ?
खासमा त यो मैले निर्देशन मात्र गर्ने भनेर शुरु भएको प्रोजेक्ट थियो तर बाध्यतावश मैले यसमा लगानी पनि गर्नुपर्ने भयो । तर म यसमा दुःखी छैन । एउटा स्तरीय सिनेमा बनाउन लागिपरेको छु । सिनेमा निर्माणको कुरा गर्दा अघि नै मैले भनिसकेँ कि सधैँ भिडियो मेकर मात्रै बनेर बस्ने कि त्यसभन्दा माथि पनि उकालो चढ्ने ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न मैले सिनेमा निर्माणमा हात हालेँ ।
तपाइँ आफ्नो सिनेमा फरक छ पनि भनिरहनु भएको छ र निखिलजस्ता व्यवसायिक कलाकारलाई पनि प्रयोग गरिरहनु भएको छ, नि ?
होइन, मसँग धेरै फरक सिनेमाको विषय थियो तर पछि लाग्यो कि पहिलो सिनेमामै मैले 'फरक सिनेमा' बनाउन खोजेर निर्मातालाई डुबाउने कि फरक स्वादको उस्तै सिनेमा बनाएर निर्माताको गोजी सुरक्षित पार्ने भन्ने प्रश्न मेरो मनमा आयो । त्यही भएर शहरी युवालाई मनपर्ने सिनेमा बनाइरहेको छु र यसको विषय यस्तो छ कि गाउँको युवाले हेर्‍यो भने पनि यसमा उसले मनोरञ्जन लिन सक्नेछ ।
खास विषय के छ त ?
त्यो चाहिँ सिनेमा प्रिमियर हुञ्जेल तपाइँले कुर्नै पर्छ ।
भूषण दाहालको कागबेनी पनि यही बेला रिलिज हुने तरखरमा छ । तपाइँलाई केही दबाब महसूस भइरहेको छ कि ?
म्युजिक भिडियोको फिल्डमा उहाँ त प्रख्यात भइहाल्नु भयो । उहाँले सिनेमामा हात हालेर हामीलाई हौसला पनि भयो । अब कुरा रहृयो, उहाँको सिनेमाले कस्तो व्यवसाय गर्छ भन्ने कुरा । एक हिसाबले व्यवसायिक रुपमा हिट या फ्लप हुनु महत्व नहोला तर हामीले जुन 'डिजिटल' सिनेमाको कुरा गरिरहेका छौँ, यदि यी सबै चलचित्र डुबे या फ्लप भए भने यो फरम्याटको विषयमा बोल्नेहरुले हामीलाई तल पार्न सक्छन् । त्यसैले कागबेनी या मिसन पैसा यी फरक चलचित्र भए पनि 'हिट' हुन जरुरी छ । यस्ता सिनेमा हिट हुने बित्तिकै मान्छेमा नयाँ जोश जाँगर आउँछ भन्ने लागिरहेको छ । जहाँसम्म दबाबको कुरा छ, उहाँको भिडियो र मेरो भिडियोमा जसरी तुलना हुन सक्तैन, त्यस्तै उहाँको सिनेमा र मेरो सिनेमाको तुलना गर्न मिल्दैनजस्तो लाग्छ ।
नेपाली सिनेमाको भविष्य कस्तो देखिरहनु भएको छ ?
धेरै राम्रो तर शर्त के छ भने अहिले बनिरहेका सिनेमाहरु चाहे नेक्ससएफएक्सको फिल्म होस् या मेरो या कागबेनी- सबैले राम्रो व्यवसाय गर्न जरुरी छ । जसरी जयनेपाल हलले अरु दुइ सिनेमाको घोषणा गरिसकेको छ, त्यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालमा सिनेमाको भविष्य अझै राम्रो हुनेछ ।
तपाइँको मिसन पैसा कहिलेसम्म रिलिज हुनसक्छ ?
योजना त जेठको अन्तिमतिर हो । तर जेठमा भएन भने भदौमा चाहिँ रिलिज हुन्छ ।
तपाइँ आफ्नो फिल्ममा निकै विश्वास जताइरहनु भएको छ, किन यसलाई १६ या ३५ एमएममा नबनाई डिजिटल फरम्याटमा बनाइरहनु भएको छ ?
अब यही फरम्याटमा बनाउँदा त यसको लगानी ३५ लाख पुग्ने सम्भावना छ, झन् यसलाई सिनेमास्पकोप या १६ मा बनाएको भए ७५ लाख पुग्ने थियो । मेरो हैसियत यति धेरैको छैन भनेर नै डिजिटलमा नै बनाएको सत्य हो ।
भिडियो बनाउनु र सिनेमा बनाउनुमा के फरक महसूस भयो त ?
म्युजिक भिडियोमा हामीले हात हालेर यसलाई उद्योगको रुप दियौँ । अब सिनेमामा हात हालेर यसलाई पनि बुलन्द उद्योगको रुपमा स्थापनामा होस्टेमा हैंसे गर्ने योजना छ । तर जहाँसम्म फरकको कुरा छ, भिडियोमा सबै थोक आफैँले गर्नुपर्दथ्यो भने अहिले कामको बाँडफाँडले गर्दा काम सजिलो भएको छ ।
यो फिल्म रिलिज गर्छु यदि सबै थोक ठीक भयो भने अझै राम्रा सिनेमाको कन्सेप्ट तयार छन् । दर्शकलाई योभन्दा स्तरीय र राम्रा सिनेमा बनाउने छु ।
मिसन पैसाका दुइ सशक्त कलाकार निशा अधिकारी आयूषा सुटिङका लागि तयार हुँदै । यी दुवैको लामो चलचित्रमा पहिलो अभिनय हो । आफूले पाएको अत्याधुनिक नारीको भूमिकाबाट दुबैले ज्यादै सन्तुष्ट रहेको बताए ।
निर्देशक नवीनता सोच कन्ट्रोभर्सी रोचक क्या बात ! फिल्म फेस्टिबल पेज3अभिनेत्री ग्ल्यामर घोषणा अभिनेता रोमान्स कार्यक्रम पार्टी सञ्चारकर्मी प्रविधि सेक्स
हलिउड मुद्दा मामिला जनावर सेक्स विज्ञापन बलिउड नग्नता माया प्रविधि सेलेब्रिटी श्रीमानश्रीमती उदेकलाग्दो कीर्तिमान यस्तो पनि ! उपाय परिस्थिति गुगल भव्यता सुन्दरी